ကရေးဆီးတိုက်ပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကရေဆီးတိုက်ပွဲ (အင်္ဂလိပ်: Battle of Crécy ) သည် ၁၃၄၆ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတည်း။ ပြင်သစ်ဘက်မှ ဆဋ္ဌမမြောက်ဖိလစ်ဘုရင် ခေါင်းဆောင်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ တတိယမြောက်အပ်ဒွပ် ကွပ်ကဲသည်။ နှစ်တရာစစ်ပွဲအတွင်း အင်္ဂလိပ်တို့က ပြင်သစ်မြောက်ပိုင်းသို့ ကူးလာစဉ် ပြင်သစ်တို့က တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကား အင်္ဂလိပ်တို့နိုင်ကာ ပြင်သစ်တို့ အဆုံးအရှုံး များသည်။ 
အင်္ဂလိပ်တပ်များသည် ခိုတန်းတင်းကျွန်းဆွယ်ကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင် ခြေချနိုင်သည်။ ယင်းနောက် ပြင်သစ်တို့နေပြည်တော် ပါရီသို့မရောက်မီ ၂ မိုင် (၃ ကီလိုမီတာ) အကွာရှိ လမ်းကြောင်းတလျှောက်ကို ဖြတ်လာရာ လမ်းရှိ လယ်ရွာကျေးလက်တို့ကို မီးတိုက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် မဟာမိတ်တပ်ဖြစ်သော ဖလန်မစ်တပ်နှင့် ပေါင်းရန် မြောက်ဘက်သို့ချီသည်။ သို့သော် ဖလန်မစ်တို့က ပြန်ဆုတ်သွားသဖြင့် နောက်မှလိုက်လာသော ပြင်သစ်တပ်ကို ခုခံရန် ခရိစီအင်ပွန်သယူ (ပွန်သယူနယ်မှ ခရိစီရွာ) အနီး တောင်စောင်းတွင် ခံစစ်ပြင်သည်။
ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက် နံနက်စောစောတွင် ပြင်သစ်တို့ ရောက်လာသောအခါ ပြင်သစ်တပ်မှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေ၏။ သို့သော် ဖိလစ်မှာ မိမိ၏ သူရဲကောင်းများ တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် တပ်ကို အနားမပေးဘဲ ရောက်မဆိုက်ပင် အင်္ဂလိပ်တို့ကို စတိုက်သည်။ အင်အားမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ထက် ၃-၄ ဆမက သာသော်လည်း၊ တပ်မှာ စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်း အမိန့်နာခံခြင်း အားနည်းသည်။ ထို့ပြင် အင်္ဂလိပ်တို့မှာ တောင်စောင်းမှ နေရာကောင်းရထားသည်နည်းတူ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုလည်းရှိ၏။ အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ စစ်ကြောင်း ၃ ကြောင်း ခွဲထားရာ၊ အက်ဒွပ်ဘုရင် ကိုယ်တိုင် စစ်ကြောင်းတခုကို ကွပ်ကဲ၍ တကြောင်းကို အသက် ၁၆ နှစ်မျှသာရှိသေးသော သားတေ ာ်အိမ်ရှေ့ဥပရာဇာ ဗလက်ပရင့်က အုပ်ချုပ်သည်။ ကျန်တကြောင်းကိုမူ မှူးမတ်များက အုပ်ချုပ်သည်။
ထိုစစ်ပွဲတွင် လေးမြားများဖြင့် စတင်တိုက်ခိုက်ကြရာ အင်္ဂလိပ်တို့ဖက်က မြားရေးသာလေသည်။ ထိုကြောင့် နောက် ဘက်မှ ပြင်သစ်မြင်းတပ် သူရဲကောင်းတို့မှာ အင်္ဂလိပ်တို့ကို လူချင်းယှဉ်တိုက်နိုင်ရန် ရှေ့သို့ အတင်းတိုးထွက်ရာ၊ ကိုယ်တပ်ကိုကိုယ် ပြန်နင်းမိ၍ ပြင်သစ်တပ်သား များစွာ ဆုံးရှုံးရလေသည်။ ယင်းသို့ ခြေလျင်တပ်နှင့်မြင်းတပ်တို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေစဉ် အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှ မြားပေါင်းများစွာဖြင့် ဒရစပ် ပစ်ခတ်သဖြင့် ပြင်သစ်တို့ အများ ကျဆုံးလေသည်။ ထိုတိုက်ပွဲမှာ တဘက်နှင့်တဘက် သဲသဲမဲမဲ တိုက်ခိုက်ကြရာ များစွာ ပြင်းထန်လှသည်။ ဗလက်ပရင့်မင်းသားကား အသက်ငယ်သော်လည်း ထိုတိုက်ပွဲတွင် ထူးချွန်စွာ တိုက်နိုင်သည်။ တိုက်ပွဲမှာ ထိုနေ့ညတွင် ပြီးဆုံးရာ ပြင်သစ်တို့ဘက်မှ တပ်လုံးပြုတ်မျှ ကျသည်။ ထိုအထဲတွင် ပြင်သစ်ဘုရင်၏ မဟာမိတ်ဘုရင်များ၊ မင်းညီမင်းသား အများအပြားပင် ကျဆုံးသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှ အကျအဆုံးကား နည်း၏။ ကရေဆီးတိုက်ပွဲမှာ နှစ်တရာစစ်ပွဲ၌ အင်္ဂလိပ်တို့က ပြင်သစ်တို့အပေါ် ကုန်းပေါ်တွင် ပထမဆုံး အောင်မြင်လိုက်သော တိုက်ပွဲဖြစ်၍ နိုင်ငံသမိုင်းတွင် ထင်ရှားသည်။ 
ဤတိုက်ပွဲတွင် နိုင်သည်နောက် ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော ခယ်လေးကို အင်္ဂလိပ်တို့က ဆက်တိုက်သည်။ ခရိစီတိုက်ပွဲကြောင့် အင်အားချည့်နဲ့နေသော ပြင်သစ်တပ်သည် မြို့ကို မကာကွယ်နိုင်သဖြင့် လက်လွှတ်ရသည်။ ခရိစီကို အင်္ဂလိပ်တို့ ၂ ရာစုကျော် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့မှာ ၁၅၅၈ ခုအထိပင်။ ခရိစီတိုက်ပွဲကြောင့် အဝေးပစ်,လေးမှာ အနောက်ဥရောပစစ်မြေပြင်တွင် အရေးပါသောလက်နက်အဖြစ် သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
↑ Barber, Richard (2013). Edward III and the Triumph of England: The Battle of Crécy and the Company of the Garter. London: Allen Lane.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရေးဆီးတိုက်ပွဲ&oldid=720144" မှ ရယူရန်